1. Maka onyinye Mgbe ụfọdụ, ọ na-abịa n'ime ogologo cylinder ka anyị wee nwee ike ịmehie nke ahụ na nzuzo Etu esi eme onyinye onyinye nke silinda? Taa anyi nwere uzo iji mebe obi uto site n'onye na-enye ihe. Ma jupụta na afọ ojuju site n'aka onye nnata nke hụrụ ọrụ aka na nlekọta na nzọụkwụ ọ bụla site na foto mbụ bụ iji kechie onye ọ bụla natara onyinye na ememme a pụrụ iche. Hụ nri na nlekọta anyị Na mgbakwunye, mgbe ị gwụchara, ị ga-adị mpako oke.
2. Ngwaọrụ eji Ihe onyinye sịlịnda
3. - Onyinye onyinye Họrọ iji kwekọọ na njirimara nke onye nnata. Iji agba na usoro kwesịrị ekwesị N'oge nke a nwere ike na-achọ eke eriri akwụkwọ. Nke ahụ na-enye mmetụta na-ekpo ọkụ na nke pụrụ iche, ọ bụghị ihe ijuanya Ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu igbe cylindrical, akwụkwọ ahọpụtara nwere ike ịdị nnukwu. Ma ọ bụ jiri akwụkwọ ahụ site na ngwakọta ọnụ mee ihe mkpuchi mara mma. - Piel teepu gluu na abụọ-kwadoro nrapado - sịlịnda igbe Enwere ike iji ya nye onyinye na oke nha Ma ọ bụ obere oge Ọ bụrụ na ọ bụ igbe onyinye ejiri chọọ ebe ahụ mma Mgbe ahụ họrọ enịm size na anya pụtara ìhè
4. Nzọụkwụ na otu esi kechie onyinye cylinder.
5. - Malite site na ịlele akwụkwọ gbara gburugburu igbe cylinder iji daba. Ma n'obosara ma ogologo n'akụkụ - - N'ogige elu na ala evenly. - Chebe njedebe nke akwụkwọ ahụ na teepu transperent dị na igbe dị n'akụkụ. Na abụọ-glued na n'akụkụ nke ọzọ nke mere na ọ dịghị metụtara na-ahụ. - Abịa na n'elu pleats Sere ngwụcha nke akwụkwọ ahụ ala Ma ofu na uzo teepu. - Gbalịa pleat na a nri n'akuku Ma jiri teepu transperent site n'oge ruo n'oge iji mee ka arịrịọ anyị jidere n'elu Na-achụ ọsọ ruo mgbe okirikiri zuru ezu. Ma mee n'akụkụ abụọ
6. - Bee mpempe akwụkwọ ahụ n’ime gburugburu wee rapara ya n’elu.
7. - Tinye rịbọn ahụ n’elu ọmarịcha - eme. Lelee agwụla ma nyefee
8. Ọ naghị esiri anyị ike Etu esi ekpuchi onyinye cylinder Onwekwara ike inye onye nnabata olile anya ozo Dị igbe ahụ dị ka nke a. Kedu ihe ị ga-enweta dị ka onyinye? Na njedebe nke afọ Enwere ike ịhazi igbe onyinye silinda. Dị ka ihe ndozi ụlọ ma ọ bụ akụkụ Krismas Iji nweta akụkụ nke ụdị dị iche iche Tinye mma na obi uto ozo, di nfe ma ghara isi ike.
9. Iji ịhụnanya na ebumnuche mee ihe Nsonaazụ ndị a na-adị mma mgbe niile, kpọọ ụmụ gị ka ha sonye na ọrụ inye onyinye maka ndị ị hụrụ n'anya. Ọ bụ ezie na nkà agaghị apụta ihe kachasị mma Ma ịhụnanya na nlekọta Ọ bụ ihe mara mma n'ezinụlọ. Omume ọzọ na-ekpo ọkụ nke ịchọrọ ka ị nwaa !!